KDE Plasma: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19? | Avy amin'ny Linux
KDE Plasma: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19?
Mamoaka ny vaovao farany tsindraindray izahay avy amin'ny KDE Plasma (5.17, 5.16, 5.15, 5.14, ankoatry ny hafa), na amin'ny sasany foto-kevitra fitokonana azy, na a fampiharana mahaliana satria hoy Tontolo iainana Desktop.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hifantoka manokana amin'ny Inona izany? y Ahoana ny fametrahana anao?. Manasongadina, mazava ho azy, ny ankehitriny DEBIAN GNU / Linux-fizarana meta, ao anatin'ny vao haingana indrindra Malagasy Bible, la laharana 10, anarana kaody Buster. Izay koa no fototry ny Distro MX-Linux 19 (Duckling mahatsiravina).
KDE Plasma Toy ny maro hafa Tontolo Desktop (DE) izay manao fiainana eo aminy Rafitra miasa GNU / Linux, Izy io dia iray amin'ireo angona taloha, izay taty aoriana dia lasa iray amin'ireo be mpampiasa indrindra, amin'ny maha-izy azy tsara tarehy, maivana, feno ary miasa.
Avy amin'ny ankehitriny 5 version, dia fantatra amin'ny anarana hoe ranon-dra. Ary mitovy amin'izay GNOME tonga toa Tontolon'ny Desktop banga (default) an'ny maro GNU / Distros Linux.
1 Ny momba ny Plasma rehetra
1.2 Tombony sy fatiantoka
1.3.1 Mampiasa ny baiko Tasksel amin'ny alàlan'ny Graphical User Interface (GUI)
1.3.2 Mampiasa ny baiko Tasksel amin'ny alàlan'ny Command Line Interface (CLI)
1.3.3 Mametraka ny fonosana ilaina farafahakeliny mivantana amin'ny alàlan'ny CLI
1.3.4 Fomba hafa ofisialy 2 an'ny fametrahana amin'ny alàlan'ny CLI
1.3.5 Fihetsika fanampiny na mifameno
Ny momba ny Plasma rehetra
Anisan'ireo zava-dehibe indrindra azo asongadina amin'ity Tontolo iainana Desktop azontsika atao ny manonona ireto hevitra manaraka ireto:
KDE ao amin'ny 1.0 version dia navoaka tamin'ny datin'ny 12 de julio de 1998 ary amin'ny ankehitriny 5 version, fantatra amin'ny hoe KDE Plasma dia navoaka tamin'ny 15 de julio de 2014.
Amin'izao fotoana izao dia a Tontolo iainana Desktop natao hanomezana a traikefa nijerena vaovao fijery mahazatra sy mora ampiasaina ho an'ny mpampiasa sy amin'ny rehetra Fitsinjarana GNU / Linux.
Hatramin'ny voalohany dia nifantoka tamin'ny manamora ny fampiasana sy ny sehatra ho an'ny mpampiasa amin'ireo fiasa, fiasa ary rindranasa rehetra ahitàna azy, amin'ny alàlan'ny a bika madio ary mora vakiana (fampisehoana), amin'ny fomba toy izany, hanome traikefa mpampiasa havaozina nohavaozina, maoderina sy madio kokoa.
Ny anaranao (KDE) is acronym for "Kool Desktop Environment". Madio tanteraka izy io Rindrambaiko maimaim-poana sy loharano misokatra (Free sy Open Source Software - FOSS).
Ampahany amin'ny Tetikasa KDE miankina amin'ny Organisation KDE. Ary miorina amin'ny toolkit izy io QT.
Izy io dia manana fampidirana tsara miaraka amin'ny Mpizara fampisehoana X Window System, ary manana fanohanana sy fampidirana tsara miaraka Wayland, raha mamela anao hampiasa ny scaling scaling, na amin'ny teny hafa, mamela ny fanitsiana ny haben'ny singa rehetra ao amin'ny birao, ny varavarankely, ny endritsoratra ary ny takelaka amin'ny fomba lavorary ho an'ny fanaraha-maso ny HiDPI.
Anisan'ny mampiavaka azy amin'izao fotoana izao ny, ny tsara tarehy sy miasa desk ary ny rafi-tontolo iainana goavana ao aminy. Ary na eo aza izany dia maivana ary tsy mila loharano firy hiasa tsara.
Ny kinova tsy miovaova ankehitriny an'ny Tontolo iainana Desktop GNOME dia laharana kinova 5.17.
Tombony sy fatiantoka
Una firaketana mafy orina tantara.
Iray ampy antontan-taratasy voarindra tsara ary havaozina amin'ny Internet.
Tena tsara, feno ary nohavaozina ny tontolo iainana ny fitaovana sy ny rindranasa.
Una vondron'olona mpampiasa sy mpandray anjara goavambe tohanan'ny fikambanana matanjaka ekena.
A Interface an'ny mpampiasa sary (GUI) azo namboarina tanteraka, tena mitovy amin'ny Windows, mihoatra ny GNOME sy ny hafa fantatra kokoa.
Heverina matetika ilay faharoa amin'ny loharano farany ny tontolo iainana Desktop, avy eo ny GNOME.
matetika mitaky karatra sary o herin-tsary tsara hanehoana ny Interface User Graphical mahafinaritra sy mahery amin'ny hakantony rehetra (GUI).
Ny haavony avo lenta sy ny safidy amboarina maro dia mety ho lasa sarotra na mora tratry ny tsy fahombiazana noho ny tsy fetezana diso.
Para hamantatra bebe kokoa avy amin'io ihany dia azonao atao ny mitsidika ireto rohy manaraka ireto:
Tranonkala ofisialy KDE Project
Fizarana ofisialy KDE Plasma
Fampahalalana sy vaovao ho an'ny mpampiasa
Fampahalalana sy vaovao ho an'ny mpamorona
DEBIAN KDE Plasma Wiki
Raha misy manana ankehitriny Fitsinjarana GNU / Linux DEBIAN 10 (Buster) na ny hafa miorina aminy, toy ny MX-Linux 19 (Duckling mahatsiravina), ny safidy fametrahana apetraka indrindra dia:
Mampiasa ny baiko Tasksel amin'ny alàlan'ny Graphical User Interface (GUI)
Mihazakazaha a Console na Terminal avy amin'ny Tontolo iainana Desktop
Mihazakazaha ny baiko baiko manaraka:
Tohizo hatramin'ny farany Fomba fitarihana toro-lalana (Select Selector).
Mampiasa ny baiko Tasksel amin'ny alàlan'ny Command Line Interface (CLI)
Mihazakazaha a Console na Terminal mampiasa ny Kitendry Ctrl + F1 ary manomboha session root ho an'ny mpampiasa.
Safidio ny Tontolo iainana Desktop Plasma KDE ary ny fitaovana hafa na ny fonosana fanampiny.
Tohizo hatramin'ny farany fomba fitarihana de Torohevitra (Select Selector).
Mametraka ny fonosana ilaina farafahakeliny mivantana amin'ny alàlan'ny CLI
Mihazakazaha a Console na Terminal avy amin'ny Tontolo iainana Desktop na mampiasa ny Kitendry Ctrl + F1 ary manomboha fivoriana ho an'ny mpampiasa fakany.
Tohizo hatramin'ny farany dingana tarihin'i Apt Package installer.
Fanamarihana: Azonao atao koa ny mametraka ny tontolon'ny Desktop miorina amin'ny KDE Plasma tsotra na feno amin'ny fanoloana ny fonosana kde-plasma-desktop ny plasma-desktop, kde-standard o kde-full.
Fomba hafa ofisialy 2 an'ny fametrahana amin'ny alàlan'ny CLI
Fihetsika fanampiny na mifameno
Manatanteraka hetsika ny fanatsarana sy fikojakojana ny Rafitra miasa mihazakazaka ny baiko baiko manaraka:
Famerenana indray ary fidio amin'ny fisafidianana ny Tontolo iainana Desktop Plasma KDE, raha toa ka manana mihoatra ny iray Tontolo iainana Desktop napetraka ary tsy nifidy ny SDDM Login Manager.
Fanamarihana: Taorian'ny fitsapana ny Tontolo iainana Desktop Plasma KDE napetraka, azonao atao ny mametraka ny fampiharana fanampiny zanatany sy plugins ilaina ny mitovy amin'izany, ohatra,:
Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho ny pejy ofisialin'ny Debian y MX-Linux, na ilay Boky torolàlana an'ny Administratera DEBIAN an-tserasera amin'ny endriny miorina.
Ary tsarovy, ity no lahatsoratra faharoa amin'ny andiany iray momba Tontolo iainana Desktop GNU / Linux. Ny voalohany dia momba GNOME ary ny manaraka dia momba XFCE.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny «Entorno de Escritorio» fantatra amin'ny anarana hoe «KDE Plasma», taloha ihany no fantatra amin'ny hoe «KDE», iray hafa amin'ny be mpampiasa indrindra eto amin'izao tontolo izao «Distribuciones GNU/Linux», dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » KDE Plasma: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19?
jlendres dia hoy izy:
Inona ny kinova plasma hapetraka?
Mamaly an'i jlendres
Miarahaba anao Jlendres. Misaotra tamin'ny hevitrao. Ilay iray azonao ampiasaina ao amin'ny trano fitahirizam-bokin'ny Distro-nao dia hapetraka.
mikelete dia hoy izy:
"Ny kinova azo antoka ankehitriny an'ny GNOME Desktop Environment dia ny laharana faha 5.17."
Mamaly an'i mikelete
Miarahaba anao Mikelete. Tena marina ny hevitrao. Amin'ny alàlan'ny rohy ao anatin'ny lahatsoratra antsoina hoe: Fampahalalana sy vaovao ho an'ny mpampiasa azonao ahatongavana amin'ity famoahana farany ity amin'ny fanontaniana napetraka: Fanambarana momba ny Plasma 5.17.5 ( https://kde.org/announcements/plasma-5.17.5.php?site_locale=es ).
Salama, tiako holazaina fa mametraka ilay kinova miorina amin'ny birao "GNOME" ilay lahatsoratra, ary tokony hametraka ny KDE.
Ny rohy voalohany amin'ilay lahatsoratra dia efa voahitsy omaly. Misaotra tamin'ny fampahalalana!
Fahalemena famonoana olona roa no hita fa misy fiatraikany amin'ny Intel
Coral, sehatry ny fahaizana artifisialy Google mitovy amin'ny RPI